Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'INetflix neChills' iletha konke okuthokozisayo kwe-Halloween!
by Waylon Jordan September 7, 2021 11,891 ukubukwa
Kumele kube ngoSepthemba. Yonke insizakalo yokusakaza kanye nesiteshi sekhebula sikhipha izinhlelo zazo ngesikhathi se-spookiest sonyaka, futhi silapha umzuzu nomzuzu waso. Akufanele kudlulwe, I-Netflix ne-Chills ibuyile futhi ngohlelo olusha noluthokozisayo kuzo zonke izinyanga zikaSepthemba no-Okthoba.
Abagcini ngokuqhamuka nochungechunge olusha sha, kepha njalo ngoLwesithathu, isigelekeqe sokusakaza sizoqala ifilimu entsha sha eshaqisayo ukukugcina ubuya ngokuningi isizini yonke. Kusukela kumafilimu omndeni kuya ekuthuseni kanzima, I-Netflix ne-Chills unokuthile kwawo wonke umuntu.
Bheka konke ukuzijabulisa okuzayo ngezansi futhi ungakhohlwa ukuthatha isithombe ezansi ukuze uthole inkomba esheshayo yokubheka!
INetflix neChills Septhemba, 2021
Septhemba 8, Into Night Isikhathi sonyaka 2:
Ngenkathi sibashiya abagibeli bethu beFlight 21 ekupheleni kweSizini 1 ekugcineni bathole isiphephelo elangeni embhedeni wakudala wamasosha aseSoviet eBulgaria, ngeshwa ukuphumula kwabo kuyancishiswa lapho ingozi yonakalisa ingxenye yokudla kwabo. Baxoshwe ngokungazelelwe ngaphandle kwenhlabathi, kufanele bahambele eGlobal Seed Vault eNorway njengomzamo omkhulu wokuvikela ukusinda kwabo. Kepha akubona bodwa abanalo mbono… Egameni lokuhle kakhulu, iqembu lethu kuzofanele lihlukane, lidlale kamnandi nabasizi bezempi, futhi lidele emncintiswaneni wokulwa nesikhathi.
Septhemba 10, Lucifer Isizini sokugcina:
Lesi yisikhathi sokugcina sikaLucifer. Ngempela ngalesi sikhathi. UDeveli uqobo usephenduke uNkulunkulu… cishe. Kungani enqikaza? Futhi njengoba umhlaba uqala ukuqaqa ngaphandle kukaNkulunkulu, uzokwenzenjani ukuphendula? Hlanganyela nathi lapho sivalelisa okumnandi kuLucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella noDan. Letha izicubu.
Septhemba 10, Prey:
Ngempelasonto yephathi yakhe ye-bachelor, uRoman, umfowabo u-Albert nabangane babo bathatha uhambo lokuya endle. Lapho iqembu lizwa ukuqhuma kwesibhamu eduze, bathi lokho kubangelwe abazingeli ehlathini. Kodwa-ke, ngokushesha bazithola besesimweni esibucayi sokusinda lapho bebona ukuthi bangabanjiswa ngumshayeli ongaqondakali.
URoman (David Kross), u-Albert (Hanno Koffler), uPeter (uRobert Finster) ku-Prey kwi-Netflix ne-Chills
Septhemba 15, Izincwadi zasebusuku:
Lapho u-Alex (Winslow Fegley), umfana othanda izindaba ezesabekayo, ebhajwe ngumthakathi omubi (uKrysten Ritter) efulethini lakhe lemilingo, futhi kufanele akhulume indaba esabekayo njalo ebusuku ukuze aqhubeke ephila, uhlangana nesinye isiboshwa, uYasmin ( Lidya Jewett), ukuthola indlela yokuphunyuka.
Septhemba 17, Umdlalo we-squid:
Isimemo esingaqondakali sokujoyina lo mdlalo sithunyelwa kubantu abasengozini abadinga imali kakhulu. Abahlanganyeli abangama-456 abavela kuzo zonke izizinda zempilo bavalelwe endaweni eyimfihlo lapho badlala khona imidlalo ukuze bawine ama-45.6 billion awinile. Yonke imidlalo ingumdlalo wezingane waseKorea wendabuko onjengeRed Light, iGreen Light, kepha umphumela wokulahlekelwa ngukufa. Ngubani ozonqoba, futhi iyini inhloso yalomdlalo?
Septhemba 22, Ukungenelela:
Lapho owesilisa nowesifazane bethuthela edolobheni elincane, ukuhlaselwa kwasekhaya kushiya unkosikazi ehlukumezekile futhi esola ukuthi labo abaseduze kwakhe kungenzeka bangabi yilokho ababukeka ngakho.
Septhemba 24, IMisa laphakathi kwamabili:
Kusukela Ukuqothulwa kweNdlu yaseHill umdali uMike Flanagan, IMISA LAPHAKATHI KOBUSUKU utshela inganekwane yomphakathi oyisiqhingi omncane, ohlukanisiwe ohlukanisiwe ezikhona zikhuliswa ukubuya kwensizwa ehlazekile (Zach Gilford) kanye nokufika kompristi onekhono (Hamish Linklater). Lapho ukubonakala kukaBaba uPaul eCrockett Island kuqondana nemicimbi engachazeki futhi ebonakala iyisimangaliso, intshiseko yenkolo evuselelwe ibamba umphakathi - kepha ingabe lezi zimangaliso ziza ngentengo?
Septhemba 29, Indoda Ye-Chestnut:
Indoda yaseChestnut ihlelwe endaweni ethulile yaseCopenhagen, lapho amaphoyisa athola khona kabi nge-blustery eyodwa ngo-Okthoba ekuseni. Owesifazane osemncane utholakale ebulewe ngesihluku ebaleni lokudlala kanti esinye isandla sakhe asikho. Eceleni kwakhe kulele indoda encane eyenziwe ngamakhunathi. Umphenyi osemusha onesifiso sokuvelela uNaia Thulin (uDanica Curcic) unikezwe leli cala, kanye nomlingani wakhe omusha, uMark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Ngokushesha bathola ucezu lobufakazi olungaqondakali endodeni ye-chestnut - ubufakazi obuyixhuma entombazaneni eyalahleka ngonyaka odlule futhi kucatshangwa ukuthi ishonile - indodakazi kasopolitiki uRosa Hartung (Iben Dorner).
Septhemba 29, Akekho Othola Ukuphila:
U-Ambar ungowokufika efuna iphupho laseMelika, kepha lapho ephoqeleka ukuthi athathe igumbi endlini yokuhlala, uzithola esenkingeni engeke abaleke.
INetflix neChills ngo-Okthoba 2021
Okthoba 1st, Amakati asabekayo:
Ngosuku lwakhe lokuzalwa lwe-12, uWilla Ward uthola isipho se-purr-fect esivula umhlaba wobuthakathi, izilwane ezikhulumayo nokunye okuningi nabangane bakhe abakhulu.
Okthoba 5, Phunyuka ku-Undertaker:
Ngabe usuku olusha lungasinda ezimangalisweni ezisendlini yobungcweti ka-Undertaker? Kukuwe ukuthi unqume ikusasa labo kulokhu okukhethekile okusebenzisana neWWE.
Ukubalekela Undertaker. (LR) Big E, Xavier Woods, Kofi Kingston noThe Undertaker ku-Escape The Undertaker. c. INetflix © 2021
Okthoba 6, Kunomuntu ngaphakathi kwendlu yakho:
UMakani Young usukile eHawaii waya ethuneni, idolobha elincane iNebraska wayohlala nogogo wakhe futhi waqeda isikole, kepha lapho kuqala ukubalwa kokuthweswa iziqu, afunda nabo bahlaselwa ngumbulali ngenhloso yokudalula izimfihlo zabo ezimnyama kakhulu kulo lonke idolobha, besabisa izisulu ngenkathi zigqoke imaski efana nempilo yobuso bazo. Ngokudlula kwakhe okuyimfihlakalo, uMakani nabangane bakhe kumele bathole ukuthi ungubani umbulali ngaphambi kokuba nabo babe yizisulu. KUNOMUNTU NGAPHAKATHI KWENDLU YAKHO isuselwa kunoveli ethengiswa kakhulu kunazo zonke kaStephanie Perkins 'enegama elifanayo futhi ibhalelwe isikrini nguHenry Gayden (Shazam!), iqondiswe nguPatrick Brice (Khotha) futhi yakhiqizwa nguJames Wan's Atomic Monster (I-the conjuring) kanye noShawn Levy's Laps's 21 (Isihambi Izinto). (Azikho izithombe ze-Netflix ne-Chills noma i-trailer etholakalayo ngalesi sikhathi.)
Okthoba 8, I-Tale Dark & ​​Grimm:
Landela uHansel noGretel njengoba bephuma endabeni yabo bangena ezinganekwaneni ezinamandla nezimbi ezigcwele isimanga - nesabekayo - isimanga.
Okthoba 13, Umkhuhlane Wephupho:
Intokazi ilele ifela kude nasekhaya. Umfana uhlala eceleni kwakhe. Akayena umama wakhe. Akayona ingane yakhe. Ndawonye, ​​baxoxa indaba ehluphayo yemiphefumulo ephukile, usongo olungabonakali, namandla nokuphelelwa ithemba komndeni. Kususelwa kunoveli ehlonishwa ngokuhlaba jikelele ngu-Samanta Schweblin.
I-FEVER DREAM (L to R) u-Emilio Vodanovich njengoDavid noMaría Valverde njengo-Amanda kuFEVER DREAM. Cr. INETFLIX © 2021
Okthoba 15, ISharkdog's Fintastic Halloween:
Ushaka / inja eyintandokazi yawo wonke umuntu ilungiselela i-fintastic Halloween yayo ekhethekile!
Okthoba 15, Wena Isizini se-3:
Esiwombeni sesi-3, uJoe noLove, manje abashade futhi abakhulisa ingane yabo, bathuthele endaweni ehloniphekile yeNyakatho California kaMadre Linda, lapho bezungezwe ngosomabhizinisi abanobuchwepheshe, ama-blogger omama abangahluleli, kanye nama-biohackers adumile e-Insta. UJoe uzibophezele endimeni yakhe entsha njengomyeni nobaba kepha wesaba ukuxhashazwa kukaLuth okuyingozi. Futhi-ke kukhona inhliziyo yakhe. Kungenzeka yini ukuthi owesifazane abemfuna sonke lesi sikhathi aphile kwamakhelwane? Ukuphula ikheji ekamelweni elingaphansi kungenye into. Kepha ijele lomshado ophelele wesithombe kowesifazane ohlakaniphe kumaqhinga akho? Yebo, lokho kuzofakazela ukuphunyuka okuyinkimbinkimbi kakhulu.
Okthoba 20, Amazinyo asebusuku:
Ukuthola imali ethe xaxa, uBenny (Jorge Lendeborg, Jr.) ongumfundi wasekolishi oyisibalo esishisayo njengoshayela ubusuku obubodwa. Umsebenzi wakhe: ukushayela izintokazi ezimbili eziyimfihlakalo (uDebby Ryan noLucy Fry) bezungeze iLos Angeles ngobusuku bephathi yokuzijabulisa. Ethunjwe yintelezi yamakhasimende akhe, usheshe ezwe ukuthi abagibeli bakhe banezinhlelo zabo ngaye - futhi bomele igazi. Njengoba ubusuku bakhe bungalawuleki, uBenny uphonswa phakathi kwempi eyimfihlo ehlangana nezizwe eziphikisanayo zama-vampire ngokumelene nabavikeli bomhlaba womuntu, oholwa ngumfowabo (uRaúl Castillo), ongeke amise lutho ukubabuyisela emuva emthunzini. Njengoba ukuphuma kwelanga kusondela ngokushesha, uBenny uphoqeleka ukuba akhethe phakathi kovalo nesilingo uma efuna ukuhlala ephila futhi asindise uMuzi Wezingelosi.
AMAZINYO AMABILI (2021)
Okthoba 27, Hypnotic:
UKate Siegel, uJason O'Mara, noDule Hill osenkanyezi kule filimu mayelana nowesifazane othola okungaphezulu kwalokho akubekelwe uma efuna usizo lwe-hypnotherapist.
Okthoba TBD, Locke & Ukhiye Isikhathi sonyaka 2:
Isizini yesibili sithatha izelamani zakwaLocke ngisho nangokwengeziwe njengoba zibhidliza ukuthola izimfihlo zefa lomndeni wazo.
Okthoba TBD, Akekho Olala Ehlathini Namhlanje, Ingxenye 2:
Ukulandelana kwefilimu ye-horror yasePoland yango-2020, Akekho Olala Ehlathini